ရေပေးဝေရေး→ရေပေးစက်•သောက်သူများ•အလှကုန်• Elkay Polska
အရသာရှိတဲ့ - စျေးပေါ
လူသည်အစဉ်အမြဲဆက်စပ်လျက်ရှိသည် ရေဘဝသည်၎င်း၏အရင်းအမြစ်များကို ဗဟိုပြု၍ လူ့ဘ ၀ ၏ရှုထောင့်အားလုံးနှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒီကနေ့စမ်းသပ်မှု ရေထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူး သူတို့ရှုပ်ထွေးသော devices များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ရေအမှတ် 2004 ကတည်းကစျေးကွက်အပေါ် operating ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းနေပါသည်။ Acuva - ခရမ်းလွန် LED မီးခွက်, အလှကုန် - ရေပေးစက်, အယ်ကေး - သောက်စား နှင့်စမ်းရေ။ Metalco - သေးငယ်တဲ့ဗိသုကာ, အဆိုတော် Valve - ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ တိုင်းတာမှု (ဥပမာစီးဆင်းမှု၊ ဖိအား)၊ ရေပေးဝေရေးကွန်ယက်၏အချက်အလက်များမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ။ လျှော့ချအဆို့ရှင်).
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ CityFormDesign.pl နှင့် ImagiLights.pl
ကုမ္ပဏီ Acuva ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာလက်ရှိပြcurrentနာများကိုဖြေရှင်းရန်၊ အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားရန်နှင့်လုံခြုံသောသောက်ရေရရှိရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရေသန့်ဆေးစနစ်များကိုအသုံးပြုသည့်နေရာနှင့် modular OEM အသုံးချမှုများတွင်အထူးပြုသည်။ လက်ရှိတွင် Acuva စနစ်အားလုံးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတိုက်ကြီးအားလုံးနီးပါးတွင်စမ်းသပ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်သည်။
Acuva Technologies Inc. နည်းပညာအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ် ခရမ်းလွန် - LED ရေပိုးသန့်ဆေး။ ခေတ်မီ။ ထိရောက်သောရေသန့်စင်ခြင်းအတွက်အဆင့်မြင့် UV-LED စနစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲ၊ ထုတ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ရည်မှန်းချက်မှာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများအတွက်လုံခြုံပြီးသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိစေရန်နှင့်၎င်းတို့သည်မြင့်မားသောဘဝအရည်အသွေးကိုရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။
အလှကုန် ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင်သေးငယ်သည့်မိသားစုပိုင်သတ္တုလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံအဖြစ်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
နောက်နှစ်များတွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးချဲ့သည် ရေခဲသေတ္တာထုတ်ကုန်များ ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်မှုကိုစတယ် ရေပေးစက်.
ကုမ္ပဏီ အယ်ကေး ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင်ချီကာဂိုမြောက်ပိုင်းဆင်ခြေဖုံးတွင်အလုပ်ရုံငယ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှု သောက်စား နှင့်ရေ spasနှစ်များတစ်လျှောက်မှာအရည်အသွေးနှင့်စံနှုန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။
ယခုဖြစ်သည် ဒီဈေးကွက်ထဲမှာကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်, လက်ခံသူများအဘို့အ၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုအဆက်မပြတ်တိုးချဲ့, အဆက်မပြတ်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တပ်ဆင်ထားမော်ဒယ်များ, ထိုကဲ့သို့သော: အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောဝန်ဆောင်မှု, အစိမ်းရောင် Tricker ကောင်တာ, စသည်တို့နှင့်အတူကတိုးချဲ့။
Metalco ၎င်းသည်စတိုင်နှင့်အညီတီထွင်မှုဖြစ်ပြီး ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ပထမဆုံးတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သောတီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
ယနေ့တွင်၎င်းသည်အကြီးဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် သေးငယ်တဲ့မြို့ပြဗိသုကာ ကမ်ဘာပျေါတှငျ။
Metalco ဆိုလိုသည် Stylဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတိုင်းနှင့်အသေးစိတ်တိုင်းရဲ့စတိုင်က Metalco ကိုသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းသမိုင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများနှင့်ကွဲပြားစေတယ်။ Metalco သည်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
Metalco ၏စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောစဉ်ဆက်မပြတ်သုတေသနနှင့်စမ်းသပ်မှုများ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာကျော်ကြားသောကျော်ကြားသောဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်နာများ၏ကုန်ကြမ်းနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
အဆိုတော် Valve အလိုအလျောက်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သည် အဆို့ရှင်ထိန်းညှိ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏လေယာဉ်မှူးလည်ပတ်သောအမြှေးပါးထိန်းချုပ်ရေးအဆို့ရှင်များသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတိုင်းနီးပါးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
၎င်းသည်အရှေ့တောင်အာရှရှိရေဆုံးရှုံးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ၏ရေကာကွယ်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာများသို့မဟုတ် US စည်ပင်သာယာဖြန့်ဖြူးရေးလိုအပ်ချက်များဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအစိုးရများ၊ မြို့ကြီးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကန်ထရိုက်တာများအတွက်ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။ ။
တင်ပြသောပြProbleနာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်၊ ကိရိယာနှင့်ထိန်းချုပ်သောအဆို့ရှင်များအထူးကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သည်အဖြေရှာသည့်တိုင်အောင်သူတို့၏သုတေသနနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်မဆုတ်မနစ်ရှိနေသည်။
ကုမ္ပဏီများ၊ ရုံးများနှင့်ပုဂ္ဂလိကအိမ်များတွင်ပင်ရေများရေဖြန့်ဖြူးစက်များတိုးများလာနေသည်။ ရေဓာတ်ငွေ့အတွက်ခေတ်သစ်စက်ကိရိယာ ...
18 မေလ 2020
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုတွင်ပညာရေး၊ HoReCa စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ အိမ်၊ ရုံးများ၊
ဧပြီလ 28 2020
ရေဖိအားလျှော့ချ, filter နှင့်ဖိအား gauge နှင့်အတူစည်းမျဉ်း။ ရေစနစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သောရေဖိအားပြောင်းလဲမှုသည်မကြာခဏ ...